Enel Green Ike na-acho oru ohuru na usoro ohuru, na-enyere usoro aka iji meziwanye nkwado gburugburu ebe obibi na ichekwa ihe di iche iche nke nrụzigharị ohuru ya, ụfọdụ n'ime ha gụnyere osisi fotovoltaic ma na ala ma na-ese n'elu mmiri, ebe ikuku, na / ma ọ bụ osisi hydroelectric.
Ndị mmadụ n'otu n'otu, otu na otu dị iche iche, ebe niile n'ụwa, yana nchekwa iche iche iche iche iche iche dị iche iche nke akpọrọ Enel's Biodiversity Innovations for Sustainability.
Ebe obu ichebe ndu na umu anumanu putara ichebara ndu, ihe nketa nke uwa, ebe, na akara ndi obodo, ihu na nchedo ihe di iche iche di iche iche kwesịrị ịbụ otu n'ime ụkpụrụ kachasị mkpa ejiri atụlee nkwado ụlọ ọrụ.
Lọ ọrụ ahụ na-amata uru nke usoro okike yana biodiversity. Ọ raara onwe ya nye njikwa ọrụ na ojiji nke ihe okike sitere n'akụkụ niile nke osisi ya n'ụwa niile, na-amalite site na imewe, iwu, arụmọrụ, na mkpochapụ.
Inwe nchebe nke ihe di iche-iche di iche iche dika ebumnobi nke atumatu gburugburu ebe obibi ya.
Enel na-eji usoro agbakwunyere usoro okike iji chekwaa ihe dị iche iche dị ndụ na ịkwalite ọrụ okike.
Site na biodiversity Innovations for Sustainability ịma aka, ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ihe ngwọta sitere n'okike iji bulie elele gburugburu ebe obibi ma belata mmetụta gburugburu ebe obibi.
Dị ka ebumnuche ya, Enel ga-enyere aka inweta 4 nke 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs):
7 - tonweta ike na ịdị ọcha
9 - Wulite akụrụngwa na-agbanwe agbanwe, kwalite mmepe na-arụ ọrụ na mmepe na-azụlite ihe ọhụrụ
11- Mee obodo na obodo mmadu mejuputara, nchekwa, resili na adigide
13 - Iguzogide mgbanwe ihu igwe
A ga-enye onyinye kacha mma (s) dị ka naanị onye nyocha kpebiri. Mkpokọta ụgwọ ga-abụ $ 15,000.
Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ ngwọta (ọ bụghị ihe karịrị ise), opekata mpe otu nrubeisi ga-enweta onyinye ruru $ 5,000, ndị ọzọkwa $ 2,500.
Ntinye aka na Biodiversity Innovation for Sustainability ịma aka mechiri na Fraịde, Juun 25, 2021. Pịa Ebe a aha.
Otu ụlọ ọrụ ike mba dị iche iche, Enel Green Power (EGP) bụ onye ndu ụwa na mmepe na njikwa nke mmepụta ume sitere na isi mmalite (ikuku, anyanwụ, hydroelectric, na geothermal).
N'ịbụ otu n'ime ndị na-ahụ maka ọkụ na gas na-arụkọ ọrụ ọnụ n'ụwa niile, ụlọ ọrụ ahụ nọ na ihe karịrị mba 30 gafee kọntinenti ise, na-ewepụta ikike na ikike zuru ezu awụnyere karịa 88 GW.
Tinye maka asọmpi mbido SLINGSHOT 2021